HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Galoà Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luvale Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Népali Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Télougou Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Mandia fotoan-tsarotra ny mpivady matetika, rehefa lehibe ny zanany ka miala ao an-trano. Hoatran’ny hoe sambany ry zareo vao miara-mipetraka. Hoy i Gary Neuman, manam-pahaizana momba ny fianakaviana: “Ireo mpivady efa nahalehibe anaka no omeko torohevitra. Tsy hitany intsony mantsy izay horesahina na hiarahana manao, ka tsy hainy hoe inona indray no hampifandray am-po azy ireo.” *
Hoatr’izany koa ve ny tokantranonareo mivady? Aza kivy fa mbola azonareo hatsaraina izany. Andeha aloha hojerentsika ny antony sasany mahatonga an’ilay olana.
Izay hahasoa ny ankizy foana no nimasoana hatramin’izay. Te hanana ny tsara ny ray aman-dreny maro, ka izay hahasoa ny zanany aloha no tadiaviny vao ny azy ireo. Zatra be miantsoroka ny andraikitry ny ray sy ny reny àry izy ireo, ka lasa tsirambina ny fifandraisan’izy mivady. Miharihary izany rehefa lehibe ny ankizy ka miala ao an-trano. Hoy ny vehivavy iray 59 taona: “Niara-nanao zavatra izahay mivady tamin’ny mbola teo ny ankizy.” Fa rehefa lasa ry zareo, dia “samy naka ho azy izahay.” Hoy mihitsy izy tamin’ny vadiny: “Hoatran’ny mifanorisory eto fotsiny isika!”
Misy tsy vonona hiatrika an’ilay fiovana. Hoy ny boky “Ary Elatra ny Ankizy” (anglisy): “Maro ny mpivady mahatsapa hoe hoatran’ny manavao be azy ireo indray ny tokantranony.” Mihevitra izy ireo fa tsy misy zavatra itovizany. Samy manao ny fiainany izy ireo, ka lasa toy ny mpiray trano fotsiny sisa.
Manomboka fiainam-baovao tokoa ianareo. Afaka ny hisoroka an’ireo olana mety haterak’izany anefa ianareo, ka hankafy an’ilay fiovana. Afaka manampy anareo ny Baiboly. Amin’ny fomba ahoana?
Ekeo ilay fiovana. Milaza ny Baiboly fa “handao ny rainy sy ny reniny” ny ankizy rehefa lehibe. (Genesisy 2:24) Araka izany, dia ny hanampy ny zanakao ho tonga olon-dehibe mahaleo tena no tanjonao. Afaka mirehareha àry ianao hoe tratranao ilay tanjona, rehefa tonga ny fotoana hialan’ny zanakao ao an-trano.—Toro lalana: Marka 10:7.
Mazava ho azy fa mbola ianao foana no rainy na reniny. Tsy mpanara-maso an’izay ataony intsony anefa ianao izao, fa mpanoro hevitra. Mbola ho afaka hifandray tsara amin’ny zanakao àry ianao, nefa koa hataonao vaindohan-draharaha ny fikarakarana ny vadinao. *—Toro lalana: Matio 19:6.
Resaho izay mampanahy anao. Resaho amin’ny vadinao izay tsapanao, noho ilay fiovana eo amin’ny fiainanareo. Henoy koa izay lazainy rehefa mamboraka ny ao am-pony izy. Miezaha hanam-paharetana sy hahatakatra an’izay tsapany. Mety ho elaela vao tena hifandray am-po ianareo mivady, nefa tsy ho very maina ny ezaka ataonareo.—Toro lalana: 1 Korintianina 13:4.
Miaraha manao zava-baovao. Diniho hoe inona ny tanjona tianareo hotratrarina, na ny zavatra mahaliana tianareo hiarahana mianatra. Azo inoana koa fa efa ampy traikefa ianareo, satria efa nahalehibe anaka. Azonareo zaraina amin’ny hafa izany.—Toro lalana: Joba 12:12.
Velomy indray ilay fitiavana. Eritrereto hoe inona ny toetra nanintona anao tamin’ny vadinao. Tsarovy ireo taona maro niarahanareo nigoka ny mamy sy ny mangidy. Ho hitanareo fa ho afaka hanomboka fiainam-baovao mahafinaritra ianareo. Ho afaka hanatsara ny fiainan-tokantranonareo ianareo raha samy miezaka. Hamelona an’ilay fitiavana tsapanao tamin’ny voalohany koa izany.
^ feh. 4 Avy amin’ny boky Efa Manambady Nefa Raiki-pitia Amin’olon-kafa (anglisy).
^ feh. 12 Tadidio fa “nofo iray” ianao sy ny vadinao, na mbola kely aza ny zanakareo sasany. (Marka 10:8) Tena mahatsiaro ho voaro ny ankizy, rehefa hitany hoe mifankatia ny ray aman-dreniny.
“Ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny.”​—Marka 10:7.
“Ny fitiavana mahari-po sy tsara fanahy.”—1 Korintianina 13:4.
“Tsy manam-pahendrena ve ny be taona?”—Joba 12:12.
SALVATORE SY AURORA
“Manam-potoana kokoa izao izahay mivady, dia tianay hohararaotina izany. Nanapa-kevitra àry izahay hoe hanampy an’ireo fianakaviana misy zanaka, sy ny mpivady tanora. Tia manampy olona izahay sady tia mizara ny traikefa anananay.”
CARLO SY CATERINA
“Elaela izahay vao tena niaiky hoe niova ny fiainanay. Ny momba ny zanakay foana mantsy no tena noresahinay, nandritra ny taona maro. Izao izahay roa vao mihazatra miresaka momba anay sy ny zavatra tianay, rehefa miara-manao zavatra.”
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! No. 4 2017 | Be Atao Loatra ve Ianao?
Raki-peo Fandikana raki-peo MIFOHAZA! No. 4 2017 | Be Atao Loatra ve Ianao?